သံ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဗီဒီယိုကဒ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ? AMD Radeon HD 7480D
ဗီဒီယိုကဒ်ပြားအကြောင်းပြောပြပါ။ အားနည်းတဲ့ဗီဒီယိုကဒ် AMD RADEON HD 7480D AMD radeon hd 7480d ဗွီဒီယိုကဒ်ဟာအားနည်းတဲ့ဗွီဒီယိုကဒ်တခုဖြစ်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကဂိမ်းအတွက်မဟုတ်၊ အင်တာနက်ကို ၀ င်ကြည့်တာ၊
အဆိုပါလက်တော့တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် connector ကိုမရှိပါဘူး, ငါ Laptop ကို Lenovo ကများ
Laptop မှာမိုက်ခရိုဖုန်းချိတ်ဆက်မှုချိတ်ဆက်ထားတာမရှိပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်မှာ Lenovo လက်တော့ပ်တစ်ခုရှိသည်။ ဘယ် laptop ပေါ်မူတည်ပြီးသင့်မှာဝါယာကြိုးတစ်လုံး၊ နားကြပ်တစ်ခုနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုအတွက်နားကြပ်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုရှိနိုင်သည်။
ငါအဘယ်ကြောင့် F8 မှတဆင့် Windows ကို 8 အတွက်ကို Safe Mode သို့မသွားနိုင်သလဲ
ကျွန်ုပ် F8 မှတဆင့် Windows 8 ရှိ Safe Mode သို့မဝင်နိူင်ပါ။ Shift + F8 ကို "Startup Options" ဖန်သားပြင် (ယခင်က "Advanced Boot Options") ဖြင့် နှိပ်၍ Windows ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။
ငါ2ဗီဒီယိုအားထားနိုင်သလား?
ဗွီဒီယိုကဒ် ၂ ခုထည့်လို့ရမလား။ သင့်တွင်ဗွီဒီယိုကဒ်အထိုင် ၂ ခုရှိသည်။ သို့သော်အဓိကဖွဲ့စည်းပုံတွင်ကဒ်များအတူတူပင်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကဒ်တူသည့်ကဒ်ကိုရှာဖွေရန်အကြံပြုလိုသည်။
ထည့်သွင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။ ကြိုးစားကြည့်ပါ - သင့်အနေဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖွင့်ထားရမည့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကောင့်အောက်ရှိစနစ်သို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ Run Command box ထဲမှာ cmd ကိုရိုက်ပြီး command prompt ကိုဖွင့်ပါ။ ဖွင့်ပွဲထဲမှာ ...
15000 ရူဘယ်များအတွက်ဂိမ်းကစားကွန်ပျူတာတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လို Prompt ။ ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား
ဂိမ်းကစားတဲ့ကွန်ပျူတာကိုရူဘယ် ၁၅၀၀၀ နဲ့ဘယ်လိုစုစည်းရမယ်ဆိုတာပြောပြပါ။ ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုငွေမျိုးအတွက်အလယ်အလတ်ချိန်ညှိချက်များမှာဂိမ်းအများစုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသင်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ ကန ဦး ရှိလျှင်လုံလောက်သည် ...
GeForce GTX 660M အစွမ်းထက်အလုံအလောက်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်?
GeForce GTX 660M သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်လား။ ငါ Beech အပေါ်အတူတူရှိသည်။ ၁: ၁ ဟာပုံမှန်ကွန်ပျူတာလိုပဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ FPS မပြောင်းလဲဘူး ဒီကဒ်ဟာအင်အားကောင်းပါတယ်၊
အအေးခံအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အအေးမခံပါနှင့်။ ၎င်းမှ connector ကိုဖြတ်တောက်ပါ။ သင်က ၁၀၀% အလုပ်လုပ်လိုပါကဝါယာကြိုးများကို connector သို့ခသို့ထည့်ပါ။ စသည်တို့ကို - အနက်ရောင်မှအနက်ရောင် ...
netbook နှေးကွေး - ဘာလုပ်ရမှန်း ???
netbook နှေးကွေး - ဘာလုပ်ရမှန်း ??? ပထမတစ်ခုမှာ laptop ကို CCleaner ဖြင့်ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာတွင်မလိုအပ်သော autoloads များကိုဖျက်ခြင်း၊ တတိယမြောက်ဗိုင်းရပ်စ်များကို Doctor Web Healing utility Dr.Web CureIt စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ပြတင်းပေါက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ
ဘယ်မှာဗီဒီယိုကဒ်များအတွက် pin ကိုရဖို့ 8 ပြုပြင်မွမ်းမံ?
ဗွီဒီယိုကဒ်အတွက် 8 pin ကိုဘယ်မှာရမလဲ။ သငျသညျ 2-pin molex (x8) adapter လိုအပ်ပြီးအရာတိုင်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ six-pin connector သည် 8-pin socket ထဲသို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုက်ညီပါက၎င်းကို plug နှင့် start လုပ်ပါ။
video card! အဆိုပါ Nvidia GeForce GT620 2GB ကဒ်တစ်နှစ် 2012 ဂိမ်းအကောင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုပြောပြ?
ဗွီဒီယိုကဒ်! NVIDIA GeForce GT620 2GB ဂရပ်ဖစ်ကတ်သည် ၂၀၁၂ ဂိမ်းများအတွက်ကောင်းပါသလား။ Ahhahahahahaha, asassin က ၁၀၀% ကနေမဖြုန်းတော့ဘူး၊ ကတ်ကမင်းအတွက်ကောင်းလားဆိုးလားလို့ပြောကြရအောင် ...
အမှုပန်ကာကိုဘယ်မှာချိတ်ရမလဲ။ အကယ်၍ ပန်ကာ connector ကသင့်အား motherboard ကိုတွယ်ကပ်ခွင့်ပြုလျှင်အထက်ပါအဖြေကိုကြည့်ပါ။ မဟုတ်ရင် 1,2-connector များကို power supply unit သို့ချိတ်ဆက်ပြီး coolers ချိတ်ဆက်ပါ။ Processor အတွက် 3- Socket ...
ပြတင်းပေါက်တစ် hard drive ကိုပြဿနာတွေ့ရှိထားပါတယ်
ယေဘူယျအားဖြင့် hard disk ပြသနာများကို windows များကတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ "chkdsk c: /f/ r" ကိုစစ်ဆေးရန်မှန်ကန်သည်။ အကယ်၍ အဆင့်နိမ့် format ချသည့် glitches ထပ်မံရှိလျှင် (mhdd သည်ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ...
core2ကို Quad Q8300 ။ သငျသညျဂိမ်းတစ်ခု Processor ကိုမဝယ်သင့်သလော
Core2Quad Q8300 ။ သငျသညျဂိမ်းများအတွက်ထိုကဲ့သို့သော Processor ကိုဝယ်သင့်သလော ပုံမှန်ပရိုဆက်ဆာ။ ဂိမ်းကစားခြင်းသည် Windows7တွင် quad cores များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် Windows XP တွင်သူတို့သည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ယူတာပိုကောင်းတယ် ...
ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုကဒ်၏ယာဉ်မောင်းဗားရှင်းကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။ Control Panel - System - Hardware - Device Manager - ဗွီဒီယို Adapters (နှစ်ကြိမ်နှိပ်ပါ) - rest ၀ ရက်တောင်ပို့စနစ် Driver ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတပ်ဆင်ပါ (EVEREST Ultimate Edition ...
Dell laptop များနှင့် ပတ်သက်. သင့်သုံးသပ်ချက်များ
dell လက်တော့ပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တုန့်ပြန်ချက်သည် Dus laptop များတွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသော hardware ရှိသည့် asus ကိုအမှန်တကယ်မယူပါ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Dell ဟာအခြား laptop တွေထက်မြန်ပြီးပိုကောင်းတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်,…
ဗီဒီယိုကဒ် Nvidia GeForce GT ကို 440 လျှင်ကောင်းသော?
Nvidia GeForce GT 440 ကဗီဒီယိုကဒ်ကောင်းလား။ NVIDIA GeForce GT 440 သည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းများတွင်အသုံးပြုသူများအားမကြုံစဖူးဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်မယုံနိုင်စရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဇာတ်ကောင်များ၊ ရှုခင်းများနှင့်ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေးသည်။
ဘာဂဏန်းတွက်စက်ကိုဖျက်နိုင်လဲ ရှေးဟောင်းနည်းပညာများကိုဖျက်သိမ်းရန်ဂဏန်းတွက်စက်တွင်လေးနက်သောပြိုကွဲမှုများစွာလိုအပ်သည်။ သော့များပြုတ်ကျပြီး alum မီးလောင်သွားသည်၊ ဘုတ်ပြတ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီယိုစိမ့်ခြင်းကဘုတ်၏အောက်ဆီဂျင်နှင့်မျက်နှာပြင်အက်ကွဲသည်။ အက်အက်ကွဲ
လက်ပ်တော့များတွင်ဗီဒီယိုကဒ်အဘယ်မှာရှိသနည်း အထဲမှာဓာတ်ပုံ။ ငါ upgrade ချင်တယ်။ တစ်ထောင့်၌၎င်း, အရာဘက်သနည်း
လက်ပ်တော့ထဲမှာဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဘယ်မှာလဲ။ အတွင်းပိုင်းဓာတ်ပုံ။ ငါအဆင့်မြှင့်ချင်တယ် ဘယ်ထောင့်နဲ့ဘယ်ဘက်လဲ Lonely Vanilla Bear ကဗီဒီယိုချစ်ပ်ကိုဘုတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီး ...
"Graphic Controller type - discrete နှင့် built-in" ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဆိုလိုသည်မှာ "ဂရပ်ဖစ်ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား - သီးခြားစီနှင့်ထည့်သွင်းထားသည့်" ဂူသွင်းထားသော - ဂရပ်ဖစ် Motherboard အတွင်းသို့ပေါင်းစည်းထားသည်။ Discrete - ဗီဒီယိုကဒ်။ ငါ beech နှင့်ဘက်ပေါင်းစုံဗီဒီယိုကဒ်လည်း ၀ ယ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဒီနေရာမှာပေါင်းစည်းထားတယ်၊
55 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 6,144 စက္ကန့်ကျော် Generate ။